E-News Nepali || Fast and Accuracy » झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजमा सामान्य घुँडा दुखेर अस्पताल पुगेकी सुनमलाइ, घुँडा दुखेको औ’षधिले मिर्गौला बिग्रियो
झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजमा सामान्य घुँडा दुखेर अस्पताल पुगेकी सुनमलाइ, घुँडा दुखेको औ’षधिले मिर्गौला बिग्रियो
काठमाडौं : घुँडा दुखेर अस्पताल पुगेकी एक महिलालाई डाक्टरले दिएको औ’षधिको असरले मिर्गौलामा खराबी देखिएपछि पीडित परिवारले अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ। झापा चारआली नगरपालिका–१३ की सुनम गौतमको मिर्गाैलामा खराबी देखिएपछि पीडित परिवार यतिबेला चिन्ताग्र’स्त छ। झापा बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा घुँडाको उपचार गराएकी सुनमको उपचार यतिबेला काठमाडौं मेडिकल कलेजमा भइरहेको छ। ‘अवस्था क्रिटिकल नै छ। मिर्गौलामा असर देखिएको छ,’ सुनमका जेठा छोरा संगमले भने। ३९ वर्षीया सुनमको दायाँ घुँडाछेउ एक्कासी दुख्न थाल्यो। घुँडाको केही भाग सुन्निएपछि उनी उपचारका लागि बी एन्ड सी अस्पताल पुगिन्। बी एन्ड सी अस्पताल पुगेकी सुनमलाई जनरल फिजिसियन डा.लक्ष्मण ठाकुरले मंसीर २७ गते जाँच गरि औ’षधि प्रेस्क्राइब गरेका थिए।
बी एन्ड सीका चिकित्सकले ‘प्रेस्क्राइब’ गरेको औ’षधि से’वनले प्रतिक्रिया गर्दा सुनमको अनुहार बिग्रँदै गएको छोरा संगमले जानकारी दिए। अस्पतालमा डा. ठाकुरले प्रेस्क्राइब गरेको इ’न्डोमे’थासिन क्या’प्सुल र लि’वोफ्लो’क्स–७५० औ’षधि से’वन गरेपछि उनको अवस्था बिग्रँदै गएको उनले बताए। अस्पतालमा विभिन्न परीक्षण गरिएको परिवारले जनाएको छ। डा. ठाकुरले प्रे’स्क्राइब गरेको औ’षधिको प्रभावले शारीरिक क्षति पुगेकाले नयाँ औषधि खुवाउनु पर्ने सुझाव काठमाडौं मेडिकल कलेजका चिकित्सकले दिएका छन्। सोहीअनुसार औ’षधि से’वन गराउन थालेको अर्का छोरा सुगमले बताए।
बिरामी सुनमलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षति पुगेको परिवारका सदस्यले बताए। चिकित्सकको हेलचेक्र्याइँका कारण सुनम दिनहुँ डे«सिङ गर्दा रुने गरेको सुगमले बताए। उनको अनुहार यतिबेला नचिनिने अवस्थामा छ। अनुहार पोलेकोजस्तो देखिन्छ। ‘शरीरको सबै ठाउँ पोलेजस्तो देखिन्छ। कुनै ठाउँ बाँकी छैन,’ संगमले भने। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि मंसिर १ गते उडानबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो। काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचाररत सुनमको मिर्गौलामा असर परेको चिकित्सकले जनाएका छन्। ‘मिर्गौलामा असर पुगेको छ। जुनसुकै बेला पनि डायलासिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर डाक्टरले भनेका छन्,’ संगमले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति १८ पुष २०७६, शुक्रबार ०५:२८